Yintoni enokuba yimbi ngaphezu komhlangano oqhelekileyo woNyaka omtsha? Hlala ngeenxa zonke etafileni, i-olivier, i-TV kunye notywala yiyona ndlela eqhelekileyo yoNyaka woNyaka omtsha. Kuthekani ukuba lo nyaka uhlukile? Okanye uququzelele imibutho embalwa engayilibaleki ngexesha leeholide leNyaka elitsha? Ngaphantsi kokuhlanganiswa kwetafile, ingoma kunye nezinto! Vula imbali yakho, uze ucinge into engavamile, kwaye ndiza kukuxelela amabali ambalwa ngamaqela ahlukeneyo.
Ukuze umcimbi wakho uphumelele, uya kufuneka: uncedo oluhle, inkampani evuya kwaye, ngokuqinisekileyo, iimpawu kunye nezixhobo eziza kugxininisa isitala sakho. Akukho imfuneko ukulungiselela umkhosi wokuNyaka kaNtsha. Ungalungiselela intlanganiso yabahlobo bakho, abahlobo bakho okanye izalamane naluphi na usuku! Into ephambili ngumnqweno wakho, ukucinga. Cinga ngomxholo weqela, qiniseka ukuba zonke iindwendwe zakho zingena kwiindleko ezifanelekileyo, zenze iimoya ezifanelekileyo, zihombise igumbi apho kuza kugcinwa khona umcimbi wokuzonwabisa. Qinisekisa ukuba uvule umculo, udala isimo esifanelekileyo. Ngoko, unokucinga ntoni ngokungaqhelekanga?
Intlanganiso elula kwaye enhle kunye nabahlobo kwifom ye "Hawaii" ngokuqinisekileyo iya kukukholisa zonke iindwendwe, zinike iimoya ezincinci zasebusika ebusika. Ukugqwesa ukuba unako ukubamba iqela elingaphantsi kwamanzi, umzekelo, kufuphi nedibi elizweni (eligqityiweyo). Ncoma abahlobo bakho ukuba bafike eekhatyeni zasehlobo, ii-T-shirts, izambatho, iingubo, iimpahla zokuhlamba. Isalathiso esihle siza kuba ngamabhola kwiigobolondo okanye kwiintyatyambo. Kwiemilenze okanye akukho nto, okanye-ukukhanya kukhanya. Ukuhlobisa indawo yeqela kunye neentyantyambo eziqhelekileyo. Xa uzama ngokwengeziwe, bhetele unokudala umoya we-tropical kwigumbi okanye kwilizwe. Thenga izitampu zeentyantyambo ezinkulu, iindawo ezihlawulelwayo. Ukuba umntakwabo okanye ubaba wakho uthanda ukuloba, uboleka kubo umnatha wokuloba. Ukufikelela okunjalo kuya kukhumbuza ngokucacileyo wonke umntu ulwandle, ilanga kunye neeholide. Ukukhanya kufanele kube lula kwaye kuthobe. Ukuba iqela laseHawaii licwangcisiwe kwigumbi elikhulu, unokwenza amalungiselelo okukhanyisa okanye ukukhanyisa indawo yokucima umlilo ukuze wenze umfanekiso wesibhobho. Njenge-snack, hlela i-buffet, eya kulungiselelwa izidlo ezikhethiweyo ezahlukeneyo. Iziqhamo zangaphandle, iiflethi ezimnandi kunye nemibukiso, iiflanzi, iifomese. Ukudibana neendwendwe zakho, faka umgca weentyantyambo ezijikelezileyo. Eyona nkcubeko engcono yeqela laseHawaii.
Ukuba uthanda amabali amangalisa kunye neempahla zokudla, ke umcimbi kwisimo sobusuku baseVenice, uya kuthanda. Into ebaluleke kakhulu kule holide kukuba akukho naluphi ubandlululo apha, kwaye wonke umntu unokuba ngubani na ofuna. Ubusuku obumnandi, obunomdla owanikezelayo! Ukudala indawo efanelekileyo, vumela abahlobo bakho bagqoke iingubo zokugqoka, bangaqeshwa. Okanye baya kugqoka iingubo zokugqoka ii-cocktail kunye neengubo. Isalathiso esiyinhloko kufuneka sibe yimaski, igqitywe kuyo yonke iindwendwe. Ukuze udibanise abanye ngokupheleleyo, unxibe i-wig. Igolide kunye nobomvu, kunye neentsiba kunye nobuso babantu abadumileyo, imaski izakuguqula wena kunye neendwendwe zakho ngaphandle kokuqaphela. Indawo Indawo yaseVeneti ihlobisa ngendlela yokudala yaseNtaliyane. Sebenzisa izibuko ezininzi, iingubo ezinzima, izivande zevini, iziqwenga zembala engaqhelekanga, ikhandlela, i-velvet, i-confetti. Konke oku kukukunceda ukuba uye kwilizwe elimangalisayo laseVenice. Unokudlala ngothando kunye nokuthatha umhlalaphantsi nabani na ofuna, kuba uya kuhlala uyingummangaliso ongaqhelekanga. Ukufumana indawo epheleleyo, kuya kufuneka uphume kwaye uqale izixhobo zomlilo. Ukutya, lungisa ukutya kwe-Italiya: iwayini ebomvu, i-pasta, i-sauces ehlukahlukeneyo kunye nokutya okulula.
Ukuba uthanda amafilimu amandulo malunga nezigqeba kunye nezigwenxa, yenza iphathi kwisitayela sokudibana nenkunzi yegundane endlwini yakho. Eli liholide liqinisekile ukuba uya kumkholisa umntu wakho, kuba, unokuziva ngathi u-Al Capone okanye uClyde. Njengezicathulo, makamkele iindwendwe ezinxibileyo kunye neengubo zokuhlwa, iingubo ezibiza kakhulu (ubucwebe obuhle kunye neengubo zegolide), ii-automatons, i-cigars, i-revolvers, i-champagne ebiza newayini. Ukuhlobisa igumbi kunye netafile yokudlala, ukufakela ukukhanya, vula i-jazz ekukhanyeni okanye i-blues. Qinisekisa ukuyila ibha ngeziphuzo ezinxilisayo ukwenzela ukuba iindwendwe zakho zingene emfanekisweni kwaye ziyeke igalazi yeskrini. I-snack efanelekileyo kwiqela le-gangster liya kuba yi-pizza. Zonke izigwenxa zexesha lonke ziyamkela i-pizza, ii-hamburgers kunye ne-cola. Kutheni na?
Ukudibana nabahlobo kunye nezihlobo kunokuba ngumhlwa ongabalekiyo. Oku akuzona zonke izifundo zeentlanganiso zesini.
2 iipuzzle zokufunyanwa eziza kwenza uSherlock Holmes acinge! Ngaba uya kusombulula ubugebengu?
Indlela yokulungisa iholide yentsapho
Unomdla kakhulu unyaka wonyaka: iholide yeholide ngoSeptemba 21
Iindlela zokupheka ezingcono kakhulu zikwahlula kunye ngaphandle kwenyama
I-aple cider cider
Inkukhu ngegalikhi kunye ne-thyme
Ubuhle besilisa nabesifazane ngamaxesha ahlukeneyo
Iklabishi inkukhu kunye nenkukhu kunye neembotyi
U-Omar Sharif wafa ngomnyaka we-83 wobomi
UOksana Samoylova (umfazi kaYigan): ubomi bomntu, abantwana, iifoto ngaphambi nangemva kweplastiki
Ikhekhe leCarrot Aargau
Unyango kunye neyeza loyiloononance
I-mullet ebusiweyo yeKrismesi